LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ The Vision minifigure?
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 421 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Minifigures, Mark Tranter ပါ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, အဆိုပါ LEGO Group, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision
Lego 71031 Marvel စတူဒီယို သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသော The Vision ၏ဗားရှင်းကိုမိတ်ဆက်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤတွင်အသံတိတ် minifigure တွင်အမြန် primer ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော Lego minifigures Vision (သို့မဟုတ် The Vision) ကိုသူတရားဝင်နာမည်ပေးထားသည့်အတိုင်း 71031 Marvel စတူဒီယို) သည် Avengers: Infinity War မှတဆင့် Avengers: Age of Ultron ၌ Avengers: Age of Ultron ၌အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်ပန်းရောင်အရောင်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကာအလွန်ရောင်စုံရှိသည်။
Tony Stark's မှ Ultron မှဖန်တီးခဲ့သည် artတရား ၀ င်ထောက်လှမ်းရေး JARVIS နှင့် Mind Stone တို့ကပေးသောအသက်တာသည် Vision သည်ဒုတိယနှင့်တတိယ Avengers ရုပ်ရှင်များနှင့် Captain America: ပြည်တွင်းစစ်တို့တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏ခရီးသည် Avengers: Infinity War တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် Thanos သည် Mind Stone ကိုသူ၏ ဦး ခေါင်းမှဆွဲထုတ်ပြီးသတ်ပစ်လိုက်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီအထိလျင်မြန်စွာရှေ့ဆက်ပါ၊ WandaVision Disneyပထမ ဦး ဆုံး Marvel streaming show-synthezoid သည်သက်ရှိထင်ရှားရှိပုံရပြီး Avengers: Endgame အခင်းအကျင်းတွင်ကောင်းစွာရောက်ရှိလာသည်။ မီနီစီးရီးများတစ်လျှောက်တွင် Wanda (သို့မဟုတ်) Scarlet စုန်းမ) Vision ၏သေဆုံးမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်အခြားအဖြစ်မှန်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် SWORD (Sentient Weapon Observation and Response Division) သည်မူလ Vision ၏ခန္ဓာကိုယ်အားပြန်လည်စုစည်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Wanda မှရရှိသောပရမ်းပတာမှော်ကို White Vision အဖြစ်ပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။ ဒါကငါတို့တွေ့တဲ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့ဗားရှင်းဘဲ 71031 Marvel စတူဒီယိုသူ၏ဝတ်ရုံမှအရောင်အားလုံးနီးပါးနှင့်အတူ။
အဆိုပါ Lego ဒီဇိုင်နာ Mark Tranter ကဖန်သားပြင်ပေါ်က Vision ရဲ့အစုအဝေးမှာမတူညီတဲ့အရိပ်တွေကိုကိုယ်စားပြုဖို့အတွက်မီးခိုးရောင်နဲ့အဖြူကိုရောစပ်ထားတဲ့ minifigure ကိုရွေးလိုက်တယ်။ သတိရှိဆုံးဖြတ်ချက် ဇာတ်ကောင်ကို ဖြတ်၍ မည်သည့်အနက်ရောင်မျဉ်းများကိုမဆိုရှောင်ရှားပါ။ The Vision ၏နောက်ဆုံးပေါ် minifigure အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးပါ အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု of 71031 Marvel စတူဒီယို.
စင်္ကြာဝBackာ၌ WandaVision သည် White Vision နှင့် Wanda မှဖန်တီးခဲ့သောဗားရှင်းမှမူရင်း Vision ၏အမှတ်တရများကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူသည် 'စစ်မှန်သောရူပါရုံ' ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာငါတို့သူ့ကိုပြန်တွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိတယ် Marvel WandaVision သည်တစ် ဦး တည်းသီးသန့်စီးရီးဖြစ်သည့်တိုင် Cinematic Universe ရုပ်ရှင်များနှင့်/သို့မဟုတ်တီဗီရှိုးများ၊ ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်သူ၏နောက်ဆုံးအရုပ်မဟုတ်ပေ။
အသေးစိတ်ကိုအလေး ထား၍ Lego အဖွဲ့ကပေးနိုင်တယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၎င်း၏ပုံမှန်စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် 'အပိုင်းအစလေးများ art'' - ဒါကငါတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်ထွက်မလဲဆိုတာသေချာရှာပါ 71031 Marvel စတူဒီယို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ပြသသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲက Check 71031 Marvel စတူဒီယို The Scarlet Witch တွင် minifigure မီးမောင်းထိုးပြထားသည် ဒီမှာလာမယ့်ရက်တွေမှာနောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ showcases တွေကိုကြည့်ပါ။
← LEGO သည် Harry Potter နှင့် Deathly Hallows အတွဲများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်သည်
LEGO NINJAGO 71750 Lloyd's Hydro Mech သည်မူလကအလွန်ခြားနားသည် →